8da Maarso: Maalin Hanbalyo Mudan | Doodwadaag waa Danwadaag.
Dunida aynu maanta ku nool nahay waxay u qaabaysan tahay qaab ka duwan qaabkii ay dadku u noolaayeen dhawr qarni ka hor. Waa duni u dhisan qaramo (nation-states) bedkoodu ha baaxad weynaado ama ha yaraado’e. Waa qaab dhismeed siyaasadeed oo meesha ka saaray dunidii muwaadinku ku suntanaa xuduud diimeed.
Golayaasha caalamiga ah ee qaramadu isugu yimaadaan waxaa shucuubta wakiil ka ah dawlado (State). Dawladuhu waxay saxiixaan axdiyo(treaties) axdiyadaas oo si toos ah iyo si dadbanba nolosheenna iyo garaadkeennaba u saameeya. Si axdiyadaa oo ay ugu waaweyn yihiin ilaalinta karaamada iyo kobcinta kartida aadaha loo hirgeliyo, waxaa la soo saaraa baaq caalami ah sida baaqa dhawridda xuquuqda caalamiga(human right declaration 1948), daryeelka qaxootiga (1951 Geneva Convention)…,iwm.
Si loo hirgeliyo axdiyadaa waxaa loo xilsaaray hay’ado caalami ah sida kuwa qaramada midoobay oo kala shaqeeya dawladaha. Waxaa la isla gartay in si gaar ah loo asteeyo halgankii dheeraa ee loo soo maray in wax laga baddalo xaaladda nololeed ee qayb ka mid ah bulshada sida maalinta loo asteeyey shaqaalaha adduunka ee 1da Maajo/May, taas oo astaan u ah dagaalkii qaraaraa ee lala galay dhiig-miiratadii dabaqaddii hantigoosata ee reer yurub soona geba gaboobay 1903/04. Uuna ka dhashay ururka maanta u taagan ilaalinta xuquuqda shaqada iyo shaqaalaha ee marka la soo gaabiyo la yiraa ILO(International Labour Organization). Sidoo kale 8da Maarso, waxaa loo aqoonsaday maalinta caalamiga ah ee haweenka adduunka(International Women’s Day). Waa maalin ina xasuusinaysa dagaalka qaraar ee dumarku u soo galeen in ay helaan xuquuq bani’aadanimo oo la siman tan ragga ah. Waa dagaal lagu cirib tirayey khuraafaad badan oo lagu aasi jirey sharafta iyo xuquuqda dumarka welina lagu aaso sida in loo abuuray in ninku ku raaxaysto oo qura, in ayanba ruuxba lahayn, in ayan maragba gelin, inay aqoonta ku fitnoobayaan…, iwm. Waa dagaal weli socda. Soomaali badanoo rag iyo dumarba isugu jira oo nolosha dhankooda ay ka tahay caddaan iyo madaw aan wax u dhaxayn ayaa il xun ku fiiriya dabaal degga maalinka 8da Maarso. Dadkaasi ma aqoonsana axdiyada dawladaha adduunku ku ballameen inay dhawraan isla markaana hirgeliyaan dawladahaas oo la jaanqaadaya hadba wacyiga bulshadoodu marayso laakiin nasiib darro waa dadka ugu badan ee ka faa’iidaysta qawaaniinta ka ratibantay axdiyadaa la isku raacay.
8da Maarso waa midda suura gelisay inaan aragno isla markaana na garab istaagaan dumar Soomaaliyeed oo waxbarasho u dareeray isla markaana buuxiyey kaalintoodii hooyonimo iyo tii bulshadu ka sugaysay ha ahaato kaalinta caafimaadka, macallinimada, ganacsiga, iyo hoggaamintaba.
Haddii aad fahmi waydey xirirka ka dhaxeeya waxbarashada dumarka iyo 8da Maarso, waxaa muhiim ah in aad xasuusnaatid in dawladaha adduunku saxiixeen baaqyo badan oo dammaanad qaadaya in dumarku xaq u leeyihiin inta raggu xaq u leeyihiin iyagoon lagu faquuqin jinsigooga.
Waxaa marag ma doonta ah in Soomaalidu muslimiin ahaayeen muddo dheer bal se ay ka gaabiyeen daryeelka iyo karaamada hooyada Soomaaliyeed. Inta hadda muuqatana ay tahay dadaaladii ay bilaabeen dawladihii Soomaaliyeed.
Dhaqdhaqaaqa Isbeddeldoonka Soomaaliyeed waxuu ku bogaadinayaa umadda Soomaaliyeed, gaar ahaan dumarka Soomaaliyeed, maalinta haweenka ee 8-da Maarso, waxuuna u rajeynayaa inay guul gaaraan.